उठाने & स्थापना-सूजौ Sohologistics कं, LTD.
होम>हाम्रो सेवाहरु>भारी लिफ्ट>उठाने र स्थापना
घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय ईन्जिनियरि projects परियोजनाहरूमा भारी कार्गोहरूको ढुवानीका लागि विभिन्न यातायात मोडहरू लिनुपर्दछ, जुन प्राय: यातायातका साधनहरू जस्तै फहराउने क्षमता, मार्ग सर्तहरू, सडक र पुल लोडि capacity क्षमता, सुरुnel चौडाई र उचाइ जस्ता प्रतिबन्धित हुन्छ। र केहि स्थानीय नियमहरु, प्रक्रिया कठिन र जटिल बनाउने।
भारी कार्गोसको यातायातलाई सुरक्षित, आर्थिक, प्रभावकारी र यथोचित तरिकाले कसरी पूर्ण गर्ने भन्ने परियोजनाको सफल कार्यान्वयनको कुञ्जी हो।
भारी कार्गोको यातायातले वास्तविक अवस्था, निर्माण स्थान, यातायात मार्ग, यातायातको साधन, लोडि and र अनलोडिंग पोर्ट, साइट उडान गर्ने उपकरणहरू र अन्य सम्बन्धित कारकहरूलाई विचार गर्दछ र सम्भाव्यता विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ।
भारी कार्गोसको सफल फहराई इञ्जिनियरिंग परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको मुख्य बिन्दु हो। लिफ्टिंग र स्थापनाको सफल समापन सुनिश्चित गर्न केहि चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ।
उठाने र स्थापना अपरेशन प्रक्रिया
१. साइटमा सामान वितरण: सबै तयारीहरू समाप्त भए पछि फहराउन र स्थापना गर्न भारी उपकरणहरू मिलाउनुहोस्।
२. फहराउनु अघि तयारी कार्य: सावधान निरीक्षण र प्रमाणिकरण आवाश्यक।
उदाहरण को लागी। जाँच गर्नुहोस् कि उपकरणसँग स्थापना मार्क छ र असर रेखा चिन्ह सही छ; चाहे उपकरणको लिफ्टिug लगहरूले लिफ्टि requirements आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ
Ho. फहराई फराकिलो धुनाई: यसमा मुख्यतया झुल्किने घण्टी, तनाव परीक्षण र इलेक्ट्रिक विन्चको अजीमुथ समायोजन, टोइ and र टोइ system प्रणालीको सेटिंग्स समावेश छ।
L. लिफ्टि trial ट्रायल: परीक्षण अघि, जाँच गर्नुहोस् र निम्न लिखित पुष्टि गर्नुहोस्:
फहराउने सामान्य कमाण्डले फहराई अपरेशन खुलासा गर्छ; पर्यवेक्षणका लागि पर्यवेक्षक पदहरू तोक्ने मुख्य बुँदाहरू र मुख्य सामग्रीहरू व्यवस्था गर्नुहोस्; लिफ्टि lower र कम गर्ने परीक्षणहरूको लागि धेरै चोटि परीक्षणले सबै भागहरूलाई सुरक्षित र समन्वय बनाउँछ र प्रत्येक भागको परिवर्तनहरूको समीक्षा गर्दछ।
-. साइटमा कार्यरत: मेजर-जनरल कमाण्डरले आधिकारिक रूपमा सबै डिप्टी कमाण्डरहरूलाई प्रत्येक पोष्टको स्ट्यान्डबाइ स्थिति जाँच गर्न र कमाण्ड सिग्नल प्रणाली सामान्य छ कि छैन भनेर जाँच गर्न आदेश दिन्छ; र कमाण्ड सेट स्टाफलाई संकेतको साथ सूचित गर्नुहोस्।
लिफ्टिंगको बखत, उपकरणहरू रोक्नुहोस् जब अस्थायी समर्थन -००-500०० मिमी माथि छोड्नुहुन्छ र सबै कुरा ठीकठाक छ कि छैन भनेर निश्चित गर्न थप निरीक्षण गर्नुहोस्;
उपकरण समर्थन हटाउन को लागी अर्को उठाउन जारी राख्नुहोस्।
क्रेन उठानका लागि अपरेसन नोटहरू
१. लिफ्टिंग वा ओर्लदै
(१) ओभरलोड वा ओभर-रेटेड टोक़ लोड सूचीको आधारमा कडा निषेधित छ।
सम्पूर्ण क्रेन अपरेशन प्रक्रियाको क्रममा ACS प्रणालीसँग विच्छेदन गर्नबाट निषेध गर्नुहोस्।
लोड कार्गोसलाई अगाडि वा बाहुको छेउबाट तान्दै निषेध गर्नुहोस्।
ट्याबको अगाडिबाट कार्गो लिफ्टि Pro निषेध गर्नुहोस्।
(२) अपरेशनको क्रममा जोइस्टिकलाई कडा तानेर तान्नुहोस्।
उठाउनु अघि, बिच्छेदन स्थितिमा क्लच लीभर निश्चित गर्नुहोस्।
()) फ्री फल अपरेसन केवल हुक ड्रप गर्ने बेला वा लोड अनुमतियोग्य लोडको 3०% भन्दा कम हुँदा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्वतन्त्र गिरावटमा आपतकालिन ब्रेकिंग निषेध गरिएको छ।
()) होस्टि dr ड्रम ह्वाइल अपेक्षाकृत लामो समय रहनको लागि भार उठाउँदा लक गरिएको हुनुपर्दछ। तर कार्गोमा झर्दै गर्दा ड्रम ह्वील लक नगर्नुहोस्।
()) लिफ्ट अपरेशन गर्दा चेतावनीमा ध्यान दिनुहोस्।
()) लिफ्टिंग अपरेसन क्षेत्रमा सिग्नलरहरू बाहेक कोही प्रवेश गर्दैन।
()) लिफ्टिंगको क्रममा बूमको शीर्ष र लाइनको बीचमा सुरक्षा दूरी .7①.k केभी / ② मी ②②k के / ③ एम6.6२3v केभी / १० मिटरको बीचमा राख्नुहोस्, कुनै पनि बिजुली चकमा दुर्घटना भएको खण्डमा।
()) दुई क्रेनहरू सँगै एक कार्गो लिफ्ट जब, एक एकीकृत कमान्डर आवश्यक छ। यसका साथै दुई क्रेनको प्रदर्शन र गति समान राख्नुपर्दछ। प्रत्येक साझा लोड मूल्य एक क्रेनको रेटेड कुल भारको %०% भन्दा कम हुनुपर्दछ; भारी भारको भार दुईवटा मेशीनको कुलको 8 80% भन्दा बढी हुनु हुँदैन।
(१) लोड स्विing जोखिमको मामलामा कुनै आपतकालीन ब्रेक वा रोटरीबाट बच्नुहोस्।
(२) मोडको क्रममा, चालकले ध्यान दिनु पर्दछ कि बोर्डमा व्यक्ति छन् वा पछाडि कुनै अवरोधहरू छन्।
()) समाप्त भएपछि मोडको ब्रेक लक गर्नुहोस्।
L. लिफ्टि te टेलिस्कोपिक बूम लिभर
(१) आर्म लिभरको साथ कुनै अतिरिक्त लोड छैन।
(२) जब टेलिस्कोपिक बूम प्रयोग भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ ट्याकल र हुकको बीचमा निश्चित दूरी हुनुपर्दछ। जब बाहिरी पाखुरा उठाउँछन्, हुक सकेसम्म कम राख्नु पर्छ।
()) जब मुख्य पावर लीभर कुल लम्बाईसहित विस्तारित हुन्छ, हात कोण अपरेशन म्यानुअलमा तोकिएको न्यूनतम कोण भन्दा कम हुँदैन, अन्यथा सम्पूर्ण मेशिन क्याप्स हुनेछ।
व्हील क्रेन बोझका साथ
जब पा with्ग्रा क्रेनले लोडसँगै बोक्दछ, सडक चिल्लो र ठोस हुनुपर्दछ, र लोड तौल निर्माता नियमहरूको अनुरूप हुनुपर्दछ। भारी कार्गोसको उचाइ जमीनबाट cm० सेन्टीमिटर भन्दा माथि हुनु हुदैन, पुल डोरीको साथ बाँधिएको। बिस्तारै मिल्दै।
लामो दूरीको ड्राइभिंग लोडसँग कडा निषेध गरिएको छ
O. लिफ्टिंग पछि सुझाव
(१) लिफ्टिंग बूमलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुहोस् र यसलाई कोष्ठकमा राख्नुहोस्।
हुकलाई आवश्यक अनुसार फिक्स गर्दै रोटरी तालिका ब्रेक गर्नुहोस्
(२) खुट्टाहरू निर्धारित क्रममा फिर्ता लिने र सुरक्षित गरिनेछ
()) क्रेनलाई फेरि पार्किंगमा ड्राइभ गर्नुहोस्
Sohologics प्रत्येक भारी cargos परियोजना रसदको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विभिन्न उठाउने र स्किडिंग उपकरणहरू प्रदान गर्न सक्षम छ।
मुख्य लिफ्टि equipment उपकरणहरू फोर्कलिफ्ट ट्रक, ट्रक क्रेन, क्रॉलर क्रेन, सेल्फ-प्रोपेल्ड मोड्युल ट्रक (सेल्फ-प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक फ्लाटबेड ट्रक) टावर क्रेन, फ्लोटिंग क्रेनहरू समावेश गर्दछ।
चीनमा उपकरण भाँडाका सेवाहरू
प्रकार मोबाइल क्रेनहरू SELF-PROPELLED MODULAR TRAILERS टावर क्रेनहरू रूट टेर्रेन क्रेनहरू क्रॉलर क्रेनहरू फोर्कलिफ्टहरू
रेटेड लोड दायरा
（T ~~० ~~ १००० १००+ ~~ १००००० + ~~० ~~ १००० 30 ~~ 500 + ~~० ~~ १००० ~~० ~~ १०००
ज्याकि and र स्किडिंग व्यापक रूपमा प्रत्येक सोहोलोजिस्टिक्स प्रोजेक्ट रसदहरूमा ठूला संरचनाहरू सार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यी अपरेशनहरू कुशल टेक्निकल र अपरेसन टीमहरूको साथ अत्यधिक सफल छन्।
सधैं जत्तिकै, हाम्रा ग्राहकहरूको लागि bespoke समाधान उत्पादनको क्रममा, सुरक्षा विचारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक रहन्छ।
१.हाइड्रोलिक ज्याकि and र स्किडि brief छोटो परिचय
हाइड्रोलिक ज्याकि and र स्किडिंग इम्प्लेसमेन्ट टेक्नोलोजीमा तीनवटा अंश हुन्छन्: रेल, स्लीपर र हाइड्रोलिक ज्याकि and र स्किडि device यन्त्र प्रणाली। यस निर्माण प्रविधिको कुञ्जी हाइड्रोलिक ज्याकि and र स्किडिing यन्त्रको प्रयोग हो। यो मुख्यतया उच्च उच्च दबाव तेल पम्प स्टेशन, अलग हाइड्रोलिक ज्याक र in-orbit भारी कार्गो गतिशील एकाई बाट बनेको छ।
हाईड्रोलिक ज्याक उच्च दबावको तेल पम्प स्टेशनमा संचालन गरेर, ट्रान्सफार्मर एकैसाथ उठाइन्छ, त्यसैले रेललाई ट्रान्सफार्मरको माथिको मा राखिन्छ। र in-orbit भारी कार्गो गतिशील एकाई ट्रान्सफार्मर सार्दै छ जुन स्थित छ।
२.हाइड्रोलिक ज्याकि and र स्किडि technical प्राविधिक सिद्धान्त र निर्माण टेक्नोलोजी
(१) प्राविधिक सिद्धान्त
हाइड्रोलिक ज्याकि and र स्किडिing टेक्नोलोजी सिद्धान्त: दुई हाइड्रोलिक ट्यूबले अल्ट्रा-हाई प्रेशर पम्प स्टेशनलाई हाइड्रोलिक जैकसँग जोड्छ, र उही समयमा उच्च दबावको तेल पम्प स्टेशनलाई तीन स्थान फोर-वे वाल्वको साथ संचालन गर्दछ, हाइड्रोलिक तेलले दबाव र हाइड्रोलिक ज्याक सिंक्रोनाइजमा उत्पादन गर्दछ। रेलको अन्डरसाइडमा ट्रान्सफार्मर ज्याक गर्दछ र ट्रान्सफार्मरको आधारमा इन-ओर्बिट भारी कार्गो स्किड गर्दछ। पछि, रेलबाट ट्रान्सफार्मर ज्याकिking गरेर र पम्प स्टेशन ओर्लार्दै, ट्रान्सफार्मर आधारमा फिर्ता आउँदछ।
(२) निर्माण टेक्नोलोजी
निर्माण प्रक्रिया प्रवाह:
ट्रान्सफार्मर गतिशील मार्ग निर्धारण गर्दै
पथ र साइट सफा गर्दै
हाइड्रोलिक दबावबाट ज्याकि trans ट्रान्सफार्मर
ट्रान्सफार्मर ज्याकि and र हाइड्रोलिक दबाव द्वारा ओर्लदै